トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "inkwenkwezi", iqabane iimvakalelo?
Ikhadi le "nkwenkwezi" kwi-3500 yen lwentsebenzo Free ukufumana indlela
umsebenzi abaxeli-mathamsanqa kwindawo reverse "inkwenkwezi" na, ngathi inkwenkwezi bubengezela ebusuku emnyama esibhakabhakeni, okulindelekileyo kunye nethemba, kwixa elizayo ibonisa ukuba zivule meko eliqaqambileyo. Kuba abantu mandulo le meko hayi Andanelisekanga kakhulu, Kusenokwenzeka kukwazi ukuba zibe kufutshane ithemba ngakumbi, ukuba abantu awonwabanga status quo, ukuba ungumgqithi imeko uvule nekamva eliqaqambileyo oko kuchazwe.
ngothando, u nga ha ingasetyenziswa ubudlelwane phambili inyathelo elinye ukusuka ulwalamano kunye naye ukuya kuyo. Kude kube ngoko, ukuze abe sokuthandana kunye neqabane yaba ulwalamano phakathi abahlobo, okanye isithembiso womtshato lover, ezifana ukungaqondani ingasombululwa, iye yaba ukuhamba isiphelo ukuba kusenokwenzeka ukuba kwenzeka oko kusenokuba phakathi kwabantu ababini.
Yintoni ukuthini kwindawo efanelekileyo iimvakalelo elinye qela
indawo ezintle "inkwenkwezi" ibimele ukuba lithetha "inkwenkwezi" na, ikamva eliqaqambileyo, ukwaneliseka, ithemba, impumelelo, njalo-njalo. Imeko ekhoyo ngoku kukuba ukuba aguquke, okanye ubeke esandleni ikamva eliqaqambileyo kwixa elizayo, ibonisa amathuba zokuqwalasela amathemba namaphupha.
Ukuba abantu uyazibuza ukuba sivume besini esahlukileyo ukuba ukhathazekile, okanye oqhele iimvakalelo ndlongondlongo kwaye uzame ndavuma, okanye akazange undibonile kuphela umhlobo bethu iimvakalelo zothando ngokwam, naye umthandi evela kumhlobo okanye ube, ezifana na isindululo umtshato evela ngumthandi, okanye kwenzeka kulindeleke ukuba ukudumba iziganeko ukuya kwixesha elizayo, kuya kwenzeka intliziyo tshintsho.
xa eli khadi ingaphandle, iimvakalelo zakhe ibhekiswe kuwe. Ukuba nawe kusenokwenzeka ukuba uye kakuhle nokuba isivumo, uya kuchitha ixesha elungileyo kwakungekho nokuba yintoni kunye naye. Ingongoma kukuba siwazise abantu ababini ixesha. Ukuba
indawo reverse "inkwenkwezi" ibimele ukuba lithetha "inkwenkwezi" Waphuma kwindawo reverse , Imeko ekhoyo, kodwa kufuneka ngethemba kuba imeko elungileyo kakhulu kum, kukho kungenzeka ukuba Li ukuba baye baphelelwa ithemba kum, nathi ukufunda kakhulu kwi izinto zibe nzima.
umthandi nto, kodwa kufuneka uthando, ngaba okanye ukuma abantu ababini mathemba zingangabonakali eziphathekayo, okanye ndahamba ukuzithemba ukuqhubeka kule meko, ukubandezeleka yokucinga kakhulu Arekore yedwa kusenokuba.
Xa kwafika eli khadi phandle, nina naye ngokwaneleyo ukuba bacinga ukuba akuthethi ukuba ukucinga ngendlela.
kungakhathaliseki ukuba yintoni ukuziva ubushushu abantu ababini, uya kuba uxakekile. Nijonge injongo kuphela inokuba imeko apho afumaneka khona, bayahlelwa enkulu yamkela ukuhamba, omkhulu zama ukushiya umzimba kwi imeko entliziyweni Kutheni. Ngaphandle bahlale iingcamango kakhulu, ndibe nako kubalulekile ngokuqinisekileyo bacinga ukuba ngenkalipho.